छोराको लोभले सन्तानको भीड, नाम सम्झनको दास्ति !! | suryakhabar.com
Home पु.समाचार छोराको लोभले सन्तानको भीड, नाम सम्झनको दास्ति !!
छोराको लोभले सन्तानको भीड, नाम सम्झनको दास्ति !!
on: August 29, 2017 In: पु.समाचारTags: No Comments
पाल्पा । रम्भा गाउँपालिका–१, हुगीकी सुमित्रा विकलाई आफ्नो विवाहको सम्झना छैन ।
माइतीले १३ वर्षको उमेरमा नरबहादुर विकसँग सुमित्रा विकको विवाह गरिदिए । विवाहपछि नरबहादुर, श्रीमती, उनका ससुराका साथ भारत गएको मात्र सुमित्रालाई सम्झना छ ।
सुमित्राले १३ सन्तानलाई जन्म त दिइन् । तर, सबै छोरा छोरीको नाम पनि सम्झन मुश्किल हुन्छ । अझै त्यसमा ३८ जना नाति नातिनीको नाम कहाँ सम्झन सक्छिन् र ? नाम सम्झन निकै सास्ती नै हुन्छ । पनाति पनातिना त कुन छोरीका हुन् उनलाई हेक्का नै हुँदैन ।
नवौँ सन्तानका रुपमा छोरा लोकबहादुर विश्वकर्माले जन्म पाएपछि नरबहादुरको परिवारमा खुशी छायो । छोरा जन्मेपछि पनि उनले अझै अर्को छोराको आशामा रहे तर छोरीलाई छोरासरह नमान्दा छोरा पाउने आशा हराउन सकेन ।
बच्चा नपाउन नरबहादुरकी श्रीमतीले दबाई खाएपछि झनै समस्या झेल्नुपर्यौ । आठ महिनासम्म रगत बग्यो, नफापेर नै होला । मरिन्छ की भन्ने डरले औषधि सेवन गर्न छाडेपछि चार छोरीको जन्म फेरि भएको उनी बताउँछन् ।
चौथौ गायत्री रम्भा गाउँपालिकाकी दुई छोरा, दुई छोरी र दुई नातिनी, पाँचौँ विष्णु भालढुंगामा दुई छोरा एक छोरी, छैटौँ शान्ति तीन छोरा एक छोरी, सातौँ सुकमाया, पाल्पा बर्दलेमा दुई छोरा, आठौँ फूलमाया एक छोरा, एक छोरी, नवौँ लोकबहादुरका एक छोरी दुई छोरा छन् । नरबहादुरले ४६ वर्षको उमेरमा छोरा जन्माए ।
नेपाली सेनाले चाल्यो यस्तो कदम, इतिहासमै कसैले नगरेको कामको सुरुवात !!
के तपाइँ जथाभावीरुपमा पार्किङ गर्नुहुँदै छ ? अब सतर्क रहनुहोला ! महानगरद्वारा ट्राफिकलाई ५० थान ह्विल लक प्रदान !!